Ulwandle efudumele, isimo sezulu sisihle, ingqalasizinda ezinhle, nethemba nesikhathi esihle - konke okuyizinto banganikeza izivakashi Anapa. Sibhedlela "Rodnik", etholakala 5 km kusuka maphakathi Anapa, ngaphezu kwazo zonke lezi zindlela osekukhulunywe, inikeza yonke imishini ezidingekile eliphezulu ukuxilongwa kanye nokwelashwa. Izimo zokuphila, ukudla kanye nemisebenzi ezithakazelisayo sokungcebeleka yokungcebeleka futhi ezingeni eliphezulu.
Labo abafisa ukuchitha i iholide alibaleke ngesikhathi esifanayo impilo yakho kubalulekile ukukhumbula ukuthi iphuzu oyinhloko lapho badinga ukufika, ukuba Anapa. Sibhedlela "Rodnik" itholakala emzini, uzothola akunzima - usendaweni Pioneer Avenue, 30. Kodwa ukuze Anapa kufinyeleleka ngezindlela eziningana. City ine emoyeni futhi wesitimela izixhumanisi emadolobheni amaningi eRussia nakwamanye amazwe. Izivakashi abakhetha emoyeni imodi yezokuthutha kusukela sezindiza Anapa ukumisa "Bus" engafinyelelwa ngebhasi noma itekisi. Kusukela esiteshini sesitimela futhi amabhasi iya ku kulesi siteshi. wathumela njalo kusukela amatekisi ibhasi (№ 134, 114, 118) lapho ukuthola indawo lapho indawo ikhona. Springs ngisho nezinye izindlela zokwelapha kanye izinyathelo zokuvimbela zilungele ukuthola imizuzu embalwa nje efika.
Abantu abakhetha ukuhamba imoto yakho siqu, ukushayela resort lihamba bebheke Simferopol onguthelawayeka. A umzila kumele kuncike iphuzu Ukuhamba.
Ukuya kulesi sibhedlela "Spring", ungakhohlwa ukupakisha e ipotimende lakho ikhamera. Phela, indawo kunenzuzo resort inikeza ithuba elikhulu ukuthatha izithombe. Lesi siqiwu emangalisayo, etholakala eduze kolwandle, endaweni landscaped ne eziningi imbali izingadi kanye nezinye izimfanelo kokuhlala ezimnandi, uyokwazi ukugcwalisa entsha iqoqo ekhaya izithombe amahle. Ekubuyeleni kwakhe ekhaya wena amazwe bayohlale bemkhumbula iholidi emangalisayo, owalinika Anapa - sibhedlela "Rodnik".
Photo endaweni, igumbi lokudlela, ukwelashwa, ezikhangayo zendawo, ebhishi kanye nezinye izikhungo ejwayelekile ka Anapa, uzodinga futhi uma ufuna ukuncoma kubangani bakho noma uvale i-resort ukuze uphumule futhi yokutakula. Kungenye into isikhathi eside ukupenda izinzuzo, kuhlukile - ukukhombisa isithombe lapho bonke ungabona ngamehlo akho.
On the ndawo isakhiwo yezokwelapha 5000 m², ngesisekelo okuyinto kungenzeka ukwenza ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe futhi ukwelashwa eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, nakhu itholakala imithombo lamanzi esiphethu, okuyinto ukuheha izivakashi, indawo lapho iba Anapa iholide. Spring akuyona indawo kuphela. Okokuqala, it is a umthombo №5 amanzi aphansi aligugu amanengi okwelapha, ehlinzekwa wumnikezeli ekamelweni futha, abasebenza Insimu sibhedlela ngo-2007. It livulekele weminyaka engu wamashumi amathathu kusungulwe. Okwesibili, umthombo hydrogen sulfide ezilamatshe amanzi sulphide like "Matsesta", esetshenziselwa ngokuba amabhati zokwelapha, futhi, okwesithathu, umthombo iodine-uxhumano lokudlulisa ezilamatshe amanzi sodium chloride, okusikhumbuza ingoma yakhe emanzini Olufile ngokugcwalisa okubhukuda kanye nokugeza.
Wonke umuntu kwaba enethemba lokuthi kolwandle - kungcono into kuphela lokho ngoba Anapa sibhedlela eyaziwa "Rodnik" kubonisa ukuthi akalenzanga. Nakhu kufika abantu abanezifo ezithile zesimiso sezinzwa, umgudu wokuphefumula, isimiso sokujikeleza kwegazi, uhlelo genitourinary, izifo tindlebe, imphumulo nomphimbo, izitho zesifazane zangasese, iziyaluyalu umzimba, izifo urological, nilishiye libe usesimweni ngcono kakhulu.
isizinda kwesifo kanye wezokwelapha kulesi sibhedlela
ukwelashwa Quality akunakwenzeka ngaphandle koxhumano ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe futhi benzeni kulesi sibhedlela has yonke imishini ezidingekayo, kanye nezifundiswa wazibonela, kuhlanganise i Udokotela awe-aleji-immunologist, wemithi yangaphakathi, gastroenterologist, udokotela ohlinzayo, udokotela wezingane ultrasound luhlolo, isazi sezinzwa, udokotela wezokwelapha nokuvuselelwa, Otolaryngologist, udokotela ukuhlola ukusebenza, Urologist, udokotela wamazinyo, wesikhumba, uchwepheshe wezokudla obulala izinzwa.
Ngokuphathelene ukwelashwa, ngaphezu nezinqubo okuyisisekelo, sinamathuba amaningi ezengeziwe, ezifana, isibonelo, izihlambi hydropathic, aromatherapy phyto, izikhumulo zezindiza, Thalasso, terrenkuro-, solar, speleo nomoya-mpilo yokwelapha, whirlpools, ukubhucungwa, Phila Juice Ukwelashwa, kolonoproktologiya, upharafini-ozokeritotherapy, iontophoresis, njll ..
sibhedlela amakhasimende luyakwazi inkambo izinqubo ngokuhambisana omunye izinhlelo ezinkulu athuthukile kanye cela udokotela ukuba enze uhlelo lwabo ngabanye ngelashwa, ukuqaliswa okunganikeza esibhedlela. iziphethu ezempilo, isimo sezulu eliyingqayizivele futhi ukusondela kolwandle ukudlala indima eliyisisekelo ekuthuthukiseni ikhasimende.
Amaphepha adingekayo ukufika
Ukuya esibhedlela "Rodnik" (Anapa), udinga ukwazi kusengaphambili ukuthi imibhalo ayadingeka ukuze uhlole abadala kanye nezingane. Ngakho, uzodinga ivawusha, iphasiphothi (kuyadingeka ukubhalisa uphawu) noma isitifiketi sokuzalwa, uma ingane, inqubomgomo yezokwelapha umshwalense futhi sibhedlela ikhadi. On ukufika izingane kuyadingeka ukunikeza ezengeziwe izitifiketi ezimbili - mayelana imigomo futhi epidokruzhenii.
253 amakamelo e 8 izakhiwo bahlinzeka elele yokuhlala sibhedlela "Rodnik". Anapa has insimu yayo nezinye amahhotela lapho ungahlala, kodwa akuwona wonke kungaba ozibongayo ukhululekile esifanayo, ifakwe yonke indawo ezidingekayo futhi base yezokwelapha-zokuxilonga ocebile, kanjani kule ndawo yeholide impilo. Kukhona amakamelo olulodwa futhi double. Kwakamuva ihlukaniswe ejwayelekile olulodwa futhi double induduzo ngcono. Kanyekanye iphendukele angazamukela abantu 420.
Igumbi ngamunye ifakwe emibhedeni kanokusho, i-TV, uhlelo yokuhlukanisa, eshaweni, isiqandisi, yokugezela. Ezinye amakamelo kuvulandi, Loggia noma ithala - kuye ngohlobo ikamelo kanye umzimba lapho itholakala. Amakamelo ayidabuli asezindaweni 1, 2, 5 no-7 izakhiwo, ngesicelo kungenziwa ifakwe i Embhedeni owenezelwe - a usofa noma embhedeni kusofa.
Kuye asesigabeni amashidi kanye amathawula baguqulelwa zonke izinsuku 3 noma 6. Ezinye amakamelo okusezingeni eliphezulu induduzo ezingeni kungenziwa ifakwe i yensimbi kanye iketela kagesi.
ezihlukahlukene Delicious izitsha zilindele yonke owama kule ukusungulwa ukhululekile, okuyinto indawo Anapa. "Spring" (sibhedlela) ifakwe imishini yesimanje kakhulu ukwelashwa, kodwa ungakhohlwa lapha ngokudla okunempilo. Izakhamuzi amakamelo "class umnotho" ejwayelekile futhi inikezwa 4 ukudla ohlelweni "imenyu-oda". Izivakashi, zikhetha izinombolo induduzo ngcono, ukondla uhlelo "lezitsha". Kuyaphawuleka ukuthi amandla afanayo bangathola futhi abebehlala kwamanye amakamelo, kuncike ezindlekweni ezengeziwe.
Kungakhathaliseki ukuthi uhlelo ukhetha amandla ungaqiniseka ngokuthi ukudla. Phela, kulesi sibhedlela akuyona kuphela indawo zokuzilibazisa nenduduzo, kodwa futhi ngelashwa, futhi lokhu akunakwenzeka ngaphandle ukudla okunempilo njalo. Ngaphezu kwalokho, abasebenzi "intwasahlobo" batusa ukudla ngaphandle resort, ezifana ngesikhathi usuku indawo, okuyinto abacebile Anapa. Sibhedlela "Rodnik" enakekela impilo izivakashi zayo futhi unesibopho kubo, akunakwenzeka ukuba ngokuqiniseka mayelana nezinye izikhungo.
Izindawo wokuzijabulisa resort
Sikhathi ngokuthi "ukuklaba" has zonke izimo, hhayi nje ngobe imisebenzi zokwelashwa nezokuchitha isizungu, kodwa futhi ngoba ezimnandi izinqubo ezokungcebeleka ezokungcebeleka kanye neminye imisebenzi ngesikhathi. Ensimini ka 5 amahektha, kukhona epaki ayimfihlo izitshalo exotic eziningi namabhentshi ongahlala kuso uma emthunzini futhi ujabulele uhlobo ezizungezile.
Izivakashi abangakwazi ukucabanga ngokuphila kwabo ngaphandle motor umsebenzi, "Spring" inikeza ejimini yesimanje, inkantolo lomphebezo, 6 amatafula table tennis, pool ongaphandle, endaweni 300 m² umdlalo basketball.
lolwandle ngasese sun bed nezambulela at ibanga 200 m - kungenye inzuzo ukuthi esibhedlela ukwelashwa "Rodnik". Anapa has on insimu yalo eziningi ezikhangayo ukuthi kungenziwa wavakashela phakathi nohambo, ihlelwe kusuka resort.
Amaholide nezingane e sibhedlela "Rodnik"
Sibhedlela "Rodnik" yakhelwe njengoba indawo yokugoba amadlangala futhi aphathe wonke umndeni. Ngu nezinqubo bavumela izingane eziqala ku 4 ubudala. Izinsana kuze kulonyaka isaphulelo 60% intengo hambo, kodwa ngaphandle kokunikezela ngamandla nendawo. Izingane kusukela eminyakeni 4 kuya kwezingu-8 ubudala uthola ithikithi isaphulelo 40%, futhi zanikeza olele (uhlaka) kanye nokudla. isaphulelo izingane eminyakeni 8-13 ubudala kuyinto 25%, uma kwesitulo-embhedeni futhi ibhodi. Izingane abaneminyaka engama 13 ukuhlala resort ku nemibandela efanayo abadala.
Ngo sikhathi ngokuthi "ukuklaba" kuyinto ebaleni lokudlala yezingane, imidlalo Igumbi ne abafundisi pool zezingane. Kukhona futhi animations imenyu ngokukhethekile izihambeli elicinathunjana resort. ungacela kwesitulo okusezingeni eliphezulu ekamelweni lokudlela.
Usuku kuvulwa resort kuyinto 1973, ngakho namuhla kukhona kakade eziningi abantu, endaweni yokuphumula kanye nokwelashwa owawungumnyaka "Spring" (sibhedlela, Anapa), ukubuyekezwa, ngokulandelana, iminyaka eminingi kangaka iye efunde ezihlukahlukene. Qala, mhlawumbe, nge okuhle kangcono. Ngakho konke kudumisa landscaped engadini resort, izikhungo zokwelapha kakhulu, abasebenzi nomusa, ukuchuma (kodwa ngesikhathi esifanayo hhayi kakhulu!) Of fun, kukhona iziphethu ezintathu amaminerali.
Nokho, kukhona amaphutha nokuthi mnyama umbono kancane omuhle, okuyinto ukwazi ukunikela Anapa. "Spring" sibhedlela Izibuyekezo ngo-2014 kwaba negative ngenxa amakamelo ungakhululekile futhi kungabi nekudla lokondla umtimba. Abaningi akhononde ngokuntuleka izithelo, side izitsha kanye monotony izingxenye ezincane kakhulu. Nakuba ukudla eyayenziwa esibhedlela iyona Ukudla evamile futhi, ngomqondo obanzi, akunakwenzeka kungaba ezahlukene. Abantu abaphethwe eziningi izifo, basutha kule menyu.
Njengoba siqhubeka nohambo imoto yakho siqu, Car Parking, esisogwini Insimu sibhedlela. Lolu hlelo lunikeza "intwasahlobo" umtapo, ekhonsathini ihholo, emini nantambama zokuzijabulisa, dance floor, khulula Wi-Fi internet café namakamelo, bar yokudlela. On the indawo kukhona legatsha le Savings Bank ne-ATM, i-pharmacy, isipho esitolo.
Ukuze uthole imali eyengeziwe, izivakashi ukusizakala yobuhle beauty isikhungo, ukuhlela umcimbi ibhizinisi egumbini inkomfa, sauna, Hammam, izinwele salon. Kukhona uhambo edeskini lapho ungenza i uhambo ulwazi ukuze Anapa neminye imizi ogwini Black Sea.
"Seliger Zaplave" - ukuzilibazisa isikhungo: incazelo, abahambi Izibuyekezo
Delfin Nessebar Aphathimenti (Bulgaria, Nesebar): incazelo ehhotela, izilinganiso
Indlela agcwalisa Kiwi esikhwameni kalula futhi inzuzo
Amafutha sunflower Sun: ezishibhile futhi bejabule, futhi okubaluleke - ngempumelelo!
Itshwayo lesiTjhaba Canada, kanye nezinye izimpawu: umlando, incazelo, look zanamuhla